Su'aalaha La Weydiiyo - Suzhou Park Park Haiermei tolidda Dharka Co., Ltd.
Ma u baahan tahay caawimaad? Hubso inaad booqato goleyaashayada taageerada si aad uga jawaabto su'aalahaaga!
Ma dalban karaa hal muunad si aan u hubiyo tayada?
Haa, dalab muunad waa lama huraan waana la aqbali karaa.
Miyaan ku samayn karaa alaabooyinka nashqadeena ama calaamadeena astaanta u ah badeecada?
Haa, Waad habeyn kartaa naqshadeyntaada, astaantaada, calaamaddaada alaabta.
Haddii tirada amarku aad u yar yahay, sida 50-100 oo gogo 'halkii qaab midabkiiba. Ma aqbali karnaa?
Haa, waan sameyn karnaa, haddii aan haysanno dhar ku filan oo amarkaaga ah.
Ma leedahay xarumo lagu sameeyo daabacaadda iyo daabacaadda?
Haa, waan sameynay, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad noo soo dirto qaabeynta / farshaxanka ama fikraddaada waana ku habboonaan karnaa si waafaqsan.
intee in le'eg baad naga qaadi doontaa tijaabada
Macaamiisha cusub, ka dib markaad bixisay kharashka shaybaarka, waxaad ka heli doontaa tijaabooyinkayaga 3 ilaa 7 maalmood; Macaamiisha caadiga ah, ka dib markaan akhrino tilmaamahaaga, waxaad ka heli doontaa tijaabooyinkayaga 3 ilaa 7 maalmood
Waa maxay muddada bixinta ee aad bixin karto? Sidee ku saabsan waqtiga hoggaaminta badan?
Tijaabada iyo amarka yar, waxay ku qaadataa DHL / Fedex / UPS / EMS qiyaastii 3-7 maalmood oo shaqo ah .Wax badan, waqtiga hogaaminta waxay ubaahantahay 35-45days, iyo amarka jumlada ee xamuulka badda, badanaa waxay qaadataa 15-30 maalmood in la yimaado dekedda macaamiisha.
Noocee lacag bixin ayaa badanaa la ganacsadaa?
Shuruudaha ugu muhiimsan ee bixinta waa T / T. Waxaan sidoo kale isticmaalnaa kuwa kale erey, laakiin inyar .Hadal weyn, 30% dhigaal ah markaad amarka bixiso, dheelitirka 70% bixinta waa in laga bixiyaa nuqulka B / L.